Ubuntu 22.04: Canonical dia mbola tsy manavao ny pejiny miaraka amin'ny logo vaovao | ubunlog
Efa tapa-bolana androany no nanaovan'ny Canonical izany tamin'ny fomba ofisialy famotsorana de Ubuntu 22.04. Izy io no dikan-teny farany indrindra, ary ny LTS vaovao, ary izany no antony nampiana hena bebe kokoa tamin'ny giro noho ny mahazatra. Araka ny filazan'ny maro, Jammy Jellyfish no famotsorana tsara indrindra nandritra ny taona maro, ary tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy lazaina ho azy izany; marina ve izany. Anisan'ireo zava-baovao nampidiriny dia nisy iray izay nanova kely ny traikefan'ny mpampiasa, saingy misarika ny saina izany raha vao manomboka solosaina miaraka amin'ny Ubuntu 22.04 ianao.
Tao amin'ny Ubuntu 22.04 dia nisy logo vaovao navoaka, a faribolana vaovao ny namana, ilay anananao eo ambonin'ny pikantsarin'ny tranonkala ubuntu.com. Ao amin'ny rafitra fandidiana dia niseho indray andro tao amin'ny Daily Build ary efa nisy hatramin'izay. Hita izany rehefa manomboka ny système d'operation, dia hita ao amin'ny Settings ... fa tsy amin'ny Internet. Ao amin'ny ubuntu.com dia manaraka ny faribolan'ny namana teo aloha, ilay nohavaozina kely tamin'ny voalohany ary misy faribolana ao ambadika. Mitohy amin’ny anarana soratana miaraka amin’ny “u” amin’ny litera kely ihany koa izany, fa tsy amin’ny litera lehibe araka ny hita ao amin’ny tolo-kevitra vaovao.
Rahoviana no ho tonga amin'ny tranokala ofisialy ny Ubuntu 22.04 CoF vaovao?
Marina fa tsipiriany tsy dia zava-dehibe loatra izy io, nefa tsy misarika ny saina? Izaho. Ny tetikasa hafa, toy ny Linux Mint na Fedora, dia nanova ny fango ary tsy naharitra ela ny fanavaozana ny pejin-tranonkalany. Raha ny marina, raha tadidiko tsara, Linux Mint dia nanomboka nampiasa ny logo vaovao tao amin'ny tranokalany alohan'ny hampidirana azy amin'ny rafitra fiasan-dry zareo. Nanam-potoana hanaovana ny fanovana ny Canonical, fa miadana izy.
Ary momba ny antony tsy niova, izaho manokana dia tsy nahita na inona na inona momba izany. Misalasala aho fa ny marika "ubuntu" dia tsy misy marika avy amin'ny rafitra miasa ary misy roa, ny iray ho marika ankapobeny sy ny rafitra fiasana. Heveriko fa tsy omeny ny maha-zava-dehibe azy izany, ary ho avy na ho ela na ho haingana ny fiovana. Ny hany azo antoka dia ny Ubuntu 22.04 dia niaraka taminay nandritra ny tapa-bolana ary mbola lany andro ny pejy ofisialy. Mandra-pahoviana ny zavatra ho hitantsika rehefa mandeha ny fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Roa herinandro taorian'ny famoahana ny Ubuntu 22.04, Canonical dia mbola tsy nanavao ny tranokalany miaraka amin'ny logo vaovao.